Uyavela umfundi waseDUT ongumholi weFees Must Fall | News24
Uyavela umfundi waseDUT ongumholi weFees Must Fall
Durban – Idlanzana labalandeli bomholi womkhankaso wemfundo yamahhala, iFees Must Fall, uBonginkosi Khanyile, belilinde ngaphandle kwenkantolo ngaphambi kokuba kuqhubeke icala lakhe eNkantolo yeMantshi yaseThekwini.
UBonginkosi Khanyile usethole ukwesekwa okukhulu kusukela aboshwa ngesikhathi semibhikisho yeFees Must Fall esikhungweni semfundo ephakeme, iDurban University of Technology (DUT) ngoSepthemba wangonyaka odlule.
Wanqatshelwa ibheyili ngenxa yokuphula umyalelo wenkantolo wangaphambilini.
OLUNYE UDABA: Amalungu e-EFF afuna kudedelwe owe-Fees Must Fall osesele yedwa ejele
UKhanyile ungaphansi kophiko lwabafundi lwe-EFF kanti ubhekene namacala angu-8, okubalwa kuwo awokudala udlame emphakathini, ukuhlangana okungekho emthethweni, ukuba sendaweni ongavunyelwe ukuba kuyona kanye nokuphehla udlame.
Lo mholi wabafundi waphonsela inselelo isinqumo seNkantolo yeMatshi eThekwini sokumnqabela ibheyili ngo-Okthoba nangoNovemba ngonyaka odlule.
Ukunqatshelwa kwakhe ibheyili kwathukuthelisa kakhulu abalandeli be-EFF nalapho omunye wabaholi babo, uGazuzu Nduli, abiza khona imantshi ngomcwasi omhlophe, wathi futhi ichemile ngaphandle kwenkantolo.